Iti yeChunmee, iTi emnyama, iJasmine Tea-Yibin Tea
Wamkelekile kwi-SICHUAN YIBIN TEA
Ukuze kuthengiswe iTi ekwiMgangatho oPhezulu weSichuan kwiMarike yaMazwe ngaMazwe, uSebenzise ngokuFanekayo iZixhobo zeTea, wandise uMvuzo wamaFama eTi, kunye nokuphucula ukuduma kukaYibin kunye noSidima ngokuThunyelwa kwamanye amazwe.
Iqela leSichuan loTywala kunye neQela leTea kunye ne-Yibin Shuangxing yoShishino lweTea Co., Ltd ngokudityanisiweyo uTyele i-10 yezigidi zeerandi ukuseka iSichuan Yibin kwishishini leTea lokuThumela ngaphandle kunye nokuThumela ngaphandle kweCo., Ltd ngoNovemba ka-2020. Iqela leSichuan loTywala kunye neTea lityale i-60%, iYibin Shuangxing yoShishino lweTea Co. ., Ltd Ityale i-40%.
UJunlian Hong ukumgangatho ophezulu...
Inkampani igxile kutyalo lweti, imveliso,
ukusebenza ngaphezu kweminyaka engama-35.
Ukusukela oko yasekwa ngo-1999, ngaphezulu kwe-100 yeZityalo zePSA, kubandakanywa ezona yunithi zikhulu zehlabathi-iseti enye yeVPSA-CO kunye neVPSA-O2 izixhobo, ziyilwe kwaye zanikezelwa nguPIONEER.
Ngo-1986, iLianxi Tea Cooperative yasekwa
Ukususela ngo-1986 ukuya ku-1998, sinikezela ngezinto eziluhlaza ze-chunmee iti eluhlaza kwiinkampani ezithumela ngaphandle iti e-Zhejiang nase-Anhui.
Ngo-2002, i-Yibin Shuangxing Tea Industry Co., Ltd.
Ngo-2005, inkampani yaqala ukugxila kwimveliso enkulu ukusuka ekuvuneni iti ukuya kwiprosesa yokuqala.
Ngo-2009, sityale izigidi ezingama-30 ukuseka isiseko semveliso ye-50-mu yokulungiswa kwesohlwayo kwindawo yoShishino yaseHaying, ephumelele ukugubungela lonke ikhonkco loshishino...
Ngo-2012, inkampani yazama ukuthumela ngaphandle kwe-chunmee iti eluhlaza iyodwa.Ngaloo nyaka, umyalelo wokuqala waphumelela, kwaye umgangatho weti wawuxabiswa kakhulu ngabathengi baseAfrika.
Ngo-2014, saya e-Afrika okokuqala ngqa ukuya kuhlola imarike kwaye savula ngokusemthethweni indlela yeti eluhlaza ye-Sichuan Chunmee eya e-Afrika.
Ukusukela ngo-2015 ukuya kuNovemba ka-2020, ixabiso lokuthunyelwa ngaphandle kwe-cumulative ligqithise amashumi ezigidi zeedola zaseMelika.
NgoDisemba ka-2020, iYibin Shuangxing Ishishini leTea Co., Ltd kunye neSichuan Liquor & Tea Group ngokudibeneyo baseka iSichuan Yibin Tea Industry Import & Export Co., Ltd. ukujoyina imikhosi kunye nokusebenza kunye ukuthumela iti yeSichuan kwihlabathi.
Sivuyisana noLiu Qiang, umntu ophethe ulawulo lomgangatho weSichuan Yibin Tea Industry Import & Export Co., Ltd, ngokuphumelela ibhaso lesithathu egameni lenkampani kwiChuan Hong Handmade Tea Skills Co...
Jin Jun Mei?Da Hong Pao okanye zombini?
UJin Jun Mei, kunye noDa Hong Pao, bakhula kwiNtaba yeWuyi, ngelixa eyokuqala ikwihlathi lokuqala leWuyi Mountain Nature Reserve, eyesibini kwimingxunya yamatye.Ezimbini zezona Tea zaseTshayina zibalaseleyo, zeziphi incasa ngcono?...
Kutheni kungekho Jasmine kwiTea yeJasmine?
Mhlawumbi uya kuziva udidekile malunga nokuba kutheni ngamanye amaxesha awukwazi ukubona i-jasmine kwiti ye-jasmine yaseTshayina.Nangona kukho, kuphela iipetali ezimbalwa ezomisiweyo ze-jasmine ziya kusetyenziselwa ukuhlobisa.Ngokwenyani, uhlobo lwe "jasmin ...